အီရန်နိုင်ငံရှိ ရွေးကောက်ပွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
အီ ဖစ္မ်ိဳးေအပေါ်အမျိုးသားအဆင့်တစ်ဦး ဦးခေါင်း၏ပြည်နယ် နှင့် အစိုးရ၏ ( နိုင်ငံတော်သမ္မတ)၊ င့္ဘူး (အ Majlis)၊တစ်ခုနှင့်"အကျွမ်းကျင်သူများက"(ဖစ္မ်ိဳးေအ ထွဋ်အထိပ်ခေါင်းဆောင်)။ လည်း မြို့ရွာကောင်စီ တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီးတိုင်းလေးနှစ်တစ်လျှောက်လုံး။ သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်များအတွက်လေးနှစ်သက်တမ်းအတွက်အားဖြင့်လူ။ လႊတ္ေသို့မဟုတ် တာ္အာဓာတ္ပုံမ်ား (Majlis-အီး Shura-ရဲ Eslami)၂၉၀ အဖွဲ့ဝင်များရွေးချယ်တင်မြှောက်များအတွက်လေးနှစ်သက်တမ်းအတွက်အကြောင်း-နှင့်သော် ငြားလည်း။ ေရြးေကာက္ပြဲအ စည်းတွေ ကျင်းပကြသည်ခပ်သိမ်းသောရှစ်နှစ်။ အားလုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအမည်ကကအတည်ပြု ဂါးကာင္စီ။ ဝီ နိုင်ငံရေး၏ အသေးစိတ်ကို။
ဇန္နဝါရီလအထိ ၂၀၀၇ ခဲ့သည့်အခါမှထမြောက် ၁၈၊အ မဲအသက်အရွယ် ကြီးသော ၁၅ နှစ်၊အနိမ့်ဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအချိန်။
အ များဆုံးမကြာသေးမီကရွေးကောက်ပွဲတွင် အ များဆုံးမကြာသေးဒေသခံရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြသည်အပေါ် ၁၉ မေ ၂၀၁၇၊တစ်ပြိုင်နက်။ အ များဆုံးမကြာသေးမီကေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နှင့် လတ်တလောပရိသတ်တွေရွေးကောက် ကြတွင်ကျင်းပခဲ့ ၂၆ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၁၆။
၂ ရြးေကာက္ပြဲခုႏွစ္မွ ၁၉၇၉
၂.၂ Majlis ရြးေကာက္ပြဲ
၃.၁ ၂၀၁၇ ရွေးကောက်ပွဲတွင်
၃.၂ 2017 ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲ
၃.၃ 2016 ညီလာခံကျွမ်းကျင်သူများက၏ရွေးကောက်ပွဲ
၃.၄ 2016 ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်
ဟာဆန်ရိုဟာနီ moderation နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ 23.636.652 57,14
Ebrahim Raisi တိုက်ခိုက်ရေးဓမ္မဆရာအစည်းအရုံး 15.835.794 38,28
Mostafa Mir-Salim အစ္စလာမ့်ညွန့်ပေါင်းပါတီ 478.267 1,16
Mostafa Hashemitaba ဆောက်လုပ်ရေးပါတီ၏အမှုဆောင်အရာရှိ 214.441 0,52
မှားနေသော / ကွက်လပ်မှတ်ပုံတင်မဲ 1.200.931 2,90
စုစုပေါင်းမှတ်ပုံတင်မဲ 41.366.085 100 အ
မှတ်ပုံတင်ထားသောမဲဆန္ဒရှင်များ / မဲပေးသူ 56.410.234 73,33
ရင်းမြစ်: ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန Archived 10 October 2017 at the Wayback Machine.
↑ O'Toole၊ Pam။ "Iran's first-time voters split"၊ BBC News၊ 12 March 2008။ 1 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2013 Iranian general elections
↑ Iran's local elections will be held with presidential
အဆိုပါရလဒ်၏သားစိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ Archived2December 2016 at the Wayback Machine.
အီရြးေကာက္ပြဲမော်ကွန်း၊ Sant 'Anna ကျောင်း၏အဆင့်မြင့်လေ့လာရေး
Psephos၊အာဒံ Carr ရဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမော်ကွန်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီရန်နိုင်ငံရှိ_ရွေးကောက်ပွဲများ&oldid=627221" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၃:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။